Halkan Ka Akhriso Wax Ka Bedalka Xildhibaanada Wakiiladu Iska Indho Tireen Ee Guddida Dhaqaaluhu Ku Samaysay Miisaaniyada Qaranka
Thursday May, 24 2018 - 05:05:25
Monday January 02, 2017 - 17:26:39 in by salman abdi
Hargeysa(AFKA);Gudidda dhaqaalaha,Maaliyadda iyo Ganacsiga ee Golaha wakiiladu iyagoo gudanaya waajibaadkooda iyo shaqada ay Qaranka iyo Gole weynahaba u hayaan, isla markaana ka duulaya awoodahooda sharci ee Xeer-Hoosaadka Goluhu u jideeyey.
Sida Ku Cad Qodobka 55aad Far. 1aad ee Dastuurka Qaranka JSL oo Golahan awood u siinaya ka doodista iyo wax ka bedelka iyo Ansixinta Odoroska Miisaaniyadaha Qaranka ee Xukuumadu u soo gudbiso, lafagurka iyo talo bixinta shaqadana ay Golaha uga masuul yihiin Gudidan dhaqaaluhu sida ku Cad Qodobka 58aad farqadaha 2aad, 3aad, 4aad, 5aad iyo 6aad ee Xeer hoosaadka Golaha Wakiilada JSL oo cadaynaya inay Gole waynaha Guddidu wakiil uga tahay soo darsida miisaaniyada qaranka ee sanadlaha ah iyo waliba arrimaha dhaqaalaha dalka guud ahaan.
Gudoomiye iyo mudanayaal, sidaad la socoteen waxa Madaxweynaha JSL dhawaan u soo gudbiyey odoroska Miiisaaniyada Qaranka ee Sanadka 2017, waxaanay Wasiirka Wasaarada Maaliyada Marwo:- Samsam Cabdi Aadan warbixinteedii sanadlaha ahayd ee ku saabsanaa miisaaniyadda Qaranka ka jeedisay Golaha hortiisa 26/12/2016. Intaas ka dibna waxa shir-gudoonku ku wareejijey Gudidda si ay waajibaadkooda shaqado uga gutaan.
Guddidu iyadoo ka dheregsan Xaaladaha guud ahaan dalka isla markaana kormeero kala duwan ku soo maray gobolada dalka, ilaha dakhli soo saar iyo masuuliyiintoodaba, soona dersay sida ay shaqada qaranku uga socoto iyo dedaalada ay wasaarada Maaliyadu ka wado..
Waxaa intaa weheliya, in ay Gudidu safaro shaqo ku tagtay Goobaha dakhligu ka Soo Xaroodo ee dalka si ay u soo indha indhayso una hubiso hawshu sida ay u socoto iyo Dakhliga ay Soo xareeyan.
Waxayna Guddidu socod dheer ku martay Goobaha Dakhliga dalka sida Dekada Barbara, Kastamka Dekedada Barbara, Kastamka Kalabaydh, Kastamka Wajaale iyo Magaalada Gabiley.
Guddidu waxay kulamo kala gedisan la yeelatay Masuuliyiintan hoos ku qoran:-
Maareeyaha Dekeda Berbera.
Maamulaha kastamada Berbera.
Badhasaabka Gobolka Saaxil.
Isu-duwayaasha Gobolka Saaxil.
Maamulaha kastamada kalabaydh
Maamulaha kastamada Wajaale.
Golaha Degaanka Gobolka Gebilay.
.Shaxda Miisaaniyadd Sanadeedka 2017ka:-
Odoroska Miisaaniyaddeed ee sanada 2017 waxay ka kooban tahay:-
Miisaaniyadda Dawladda Dhexe.
Miisaaniyadda Hay’addaha Madaxa banaan ee Dawladda.
Miisaaniyadda Dawladaha Hoose.
Miisaaniyadda Sanduuqa horumarinta Somaliland ee ay maalgeliyaan wadamada Qaadhaan bixiyayashu (Somaliland Development fund).
Miisaaniyadda Mashruuca Maamul Daadejinta Dawladda Hoose (JPLG).
Mudaneyaal Miisaaniyadani waa Miisaaniyaddii 25aad ee Qaranka Somaliland yeesho, waxay Miisaaniyaddani ka badan tahay tii 2016 27.5% (Boqolkiiba Toddoba iyo laabatan iyo badh).
Marka lo eego Miisaaniyaddi 2010kii waxay Miisaaniyaddani ka badan tahay 401% (Boqolkiiba afar boqol iyo kow).
Guud ahaan Dakhliga Miisaaniyadda 2017 wuxuu ka kooban yahay 2,175,104,355,662 una dhiganta Doolar ahaan $362,517,393 tafaasiisheeduna waxay tahay sidatan:-
1 Dawladda Dhexe 1,553,204,022,280 $258,867,337
2 Hay’adaha Madaxa-banaan 303,338,532,125 $50,556,422
3 Dawladaha Hoose 208,570,347,257 $34,761,725
4 Dakhliga Deeqaha Caalamiga ah 97,861,212,000 $16,211,427
5 Dakhliga Mashruuca Maamul Daadejinta 12,722,892,000 $2,120,482
Faahfaahinta Dakhliga Miisaaniyadda 2017:
No. Wakaalada/Hay’ada Budget 2017 Dollar
2 Dawladaha Hoose 208,570,347,257 $34,761,725
3 Dekedda Berbera 200,891,841,500 $33,761,974
4 Baanka Dhexe 29,965,644,952 $4,994,274
5 Wakaaladda Biyaha Gebilay 2,122,323,000 $353,721
6 Wakaaladda Biyaha Hargeisa 25,719,277,055 $4,2$86,546
7 Wakaaladda Biyaha Burco 11,218,141,645 $1,869,690
8 Madbacada Qaranka 4,747,807,513 $791,301
9 Wasaarada Duulista 3,085,200,000 $514,200
10 Wakaaladda Biyaha Berbera 6,325,324,600 $1,054,221
11 Wakaaladda Laydhka Berbera 12,373,771,860 $2,062,295
12 Wakaaladda Biyaha Boorama 6,889,200,000 $1,148,200
13 Dakhliga Deeqaha Caalamiga ah 97,861,212,000 $16,211,427
14 Dakhliga Mashruuca Maamul Daadejinta 12,722,892,000 $2,120,482
Grand Total 2,175,104,355,662 $362,517,393
Mudaneyaal Miisaaniyadda 2017 waxay kaga duwaan tahay Miisaniyaddihi hore in ay Xooga saarayso Qodobadan hoos ku qoran:-
Kharashka Doorashooyinka iyo Kaadh bedalka.
Korodhinta Mushahaarooyinka Shaqaalaha iyo Ciidamada dalka 10%
Korodhka Miisaaniyadda Ictiraaf-raadinta.
Kharashka Ciidamada illaalada Shidaalka.
Dhismaha Goobaha Dabdemiska ee Boorama,Burco iyo Wajaale.
Dhismayaasha Garoonka Shulaac Stadium, Guryaha Macalimiinta, Goobaha Kalluumaysiga,Libraryga Boorama, Libraryga Berbera.
Dhismayaasha Xafiisyada Wasaaradda Maaliyadda.
Dhismaha Xarunta Gobolka ee Burco.
Dayactirka garoonka Kubada Kolayga ee Timacadde.
Daryeelka iyo Dibu Dhiska Iskuulada dalka.
Iibsiga Qalabada Caafimadka,Gaadiidka iyo Qalabka Xafiisyadda Wasaaraddaha.
Kalmooyinka Agoomaha,Madxafka Saryan,Uruurka Dhakhatiirta, iyo Kaalmada Dalada Dhalinyarada ee SONYO.
Mashruuca Xanaanada Xoolaha.
Talo soo jeedinta Guddida:
Guddida Dhaqaalaha,Maaliyadda iyo Ganacsiga marka aragtay soona deristay Odorska Miisaaniyadda Qaranka ee 2017 isla markaana kulamo kala duwan la yeelatey qeybaha aan sare ku soo xusney, waxay soo jeedinaysa Qodobadan Hoos ku Xusan:-
In Dhamaan Ceelasha laga qodayo dalka la hoos geeyo Wasaaradda Khayraadka Biyaha.
In ay Guddida Dhaqaalahu ku daba gasho lacagaha ay World Bank ku caawinayaan Golaha Wakiilada, Wasaaraddaha iyo Hay’adaha Dawlada ee kala duwan Jsl.
In Cid walba oo qaadatay Mashaaricda qodista Riigaga lagu daba galo laguna Xisaabtamo.
In Wasaarad waliba so gudbiso Deeqaha ay ka helan Hay’addaha laguna daro Miisaaniyadda Qaranka.
Guddidu waxay Go’aan Guddi ku gaadhay Qodobadan Soo socda:-
In lacagta loogu talo galay Laabka (Mishiinka Shaybaadka) ee ku jirta Wasaaradda Caafimadka lacagtaas oo dhan 4,800,000,000 Sl Shilling lagu Wareejiyo Hay’aada Illaalinta Tayada (Quality Control).
In Lacagta Kaalmada ah ee loogu talo galay Ururka Saxaafada SOLJA Lacagtaas oo dhan 300,000,000 Sl Shilling ah la hoos geeyo Wasaaradda Warfaafinta iyad oo la raacayo habraaca Maamulka, Xisaabadka Iyo Maaliyadda Qaranka JSL.
In Lacagta Kaalmada ah ee loogu talo galay Guddida Wanaagfarista iyo Xumaan rebista lacagtaas oo dhan 700,000,000 Sl Shilling la hoos geeyo Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta iyada oo la raacayo habraaca Maamulka, Xisaabadka Iyo Maaliyadda Qaranka JSL.
In Lacagta Kaalmada ah ee loogu talo galay Dalada Dhalinyarada SONYO lacagtaas oo dhan 300,000,000 Sl Shilling la hoos geeyo Wasaaradda Dhalinyaradda iyo Ciyaaraha iyada oo la raacayo habraaca Maamulka, Xisaabadka Iyo Maaliyadda Qaranka JSL.
In Lacagta Kaalmada ah ee loogu talo galay Dalada Naafada Qaranka lacagtaas oo dhan 400,000,000 Sl Shilling la hoos geeyo Wasaaradda Arimaha Bulshada iyada oo la raacayo habraaca Maamulka, Xisaabadka Iyo Maaliyadda Qaranka JSL.
In Lacagta Kaalmada ah ee la siiyo Uruurka Dhakhaatirta lacagtaas oo dhan 300,000,000 Sl Shilling lagu wareejiyo takulada Gurmadka abaaraha.
In Lacag dhan 900,000,000 (Sagaal boqol oo Milyan) loo qoondeeyo Iskuulka Farsamadda Gacanta ee Haldoor lacagtaasna laga jarayo Kharashka basaaboorka laga qaado.
Gudaha:-Dhibaatada Haysta Gadiidleyda Iskaga Gooshta Somaliland Iyo Jabuuti.
Laascanood:-Xildhibaan Indho Indho Oo Markale Eedaymo Ku Ganay Madaxwaynaha Maamulka Puntaland
19/05/2018 - 16:36:07
Malaysia:-Booliiska Malaysia oo gacanta ku dhigay lacag iyo dahab badan.